SIDEE LOOGU WAREEJIN KARAA MICROSOFT OFFICE KOMBIYUUTAR CUSUB? - JILICSAN
Sidee Loogu Wareejin karaa Microsoft Office Kombiyuutar Cusub?
Microsoft Office shaki la'aan waa mid ka mid ah codsiyada wax soo saarka/ganacsiga ugu wanaagsan ee halkaas ka jira. Markii hore la sii daayay 1990-kii, Xafiisku waxa uu soo maray casriyeyn aad u yar waxaana lagu heli karaa noocyo kala duwan iyo shatiyo taas oo ku xidhan baahida qofka. Waxay raacdaa moodal ku-saleysan is-diiwaangelin iyo shatiyo u oggolaanaya isticmaaleyaasha inay ku rakibaan qolka codsiga ee habab badan ayaa sidoo kale la diyaariyay. Shatiyada aaladaha badan waxaa badanaa door bida ganacsiyada halka ashkhaastu ay inta badan doortaan hal shatiga.
Si kasta oo uu xafiisku u weyn yahay, arrimuhu waxay noqdaan kuwo adag marka isticmaaluhu ay tahay inuu ku wareejiyo rakibaadda Xafiiskiisa kombiyuutar kale/cusub. Isticmaaluhu waxa uu u baahan yahay in uu aad uga taxadaro marka uu wareejinayo Xafiiska si aanu u khaldin shatigiisa rasmiga ah. Iyadoo habka wareejinta loo fududeeyay noocyada cusub (Office 365 iyo Office 2016), nidaamku wax yar ayuu u dhib badan yahay kuwii hore (Office 2010 iyo Office 2013).
Si kastaba ha ahaatee, maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa sida loogu wareejiyo Microsoft Office (dhammaan noocyada) kombiyuutar cusub iyada oo aan la kharribin shatiga.
Sidee loogu wareejin karaa Microsoft Office 2010 iyo 2013 Kombiyuutar Cusub?
Hubi nooca shatiga Microsoft Office
Hubi tirada rakibaadda la oggol yahay & wareejinta shatiga Xafiiskaaga
Ku wareeji Microsoft Office 2010 ama Xafiiska 2013 shatiga
Ku wareeji Microsoft Office 365 ama Office 2016 kombiyuutar cusub
Ka hor inta aynaan u gudbin tillaabooyinka wareejinta Xafiiska 2010 iyo 2013, waxa jira dhawr shuruudood.
1. Waa inaad haysataa warbaahinta rakibaadda (disk ama faylka) ee Xafiiska.
2. Furaha badeecada 25 nambar ah ee u dhigma warbaahinta rakibaadda waa in la yaqaanaa si loo hawlgeliyo Xafiiska.
3. Nooca shatiga aad leedahay waa inuu noqdaa mid la wareejin karo ama la taageerayo rakibaadda isku xigta.
Sidii hore loo soo sheegay, Microsoft waxay iibisaa shatiyo kala duwan oo Office ah oo ku saleysan shuruudaha isticmaalaha. Shatiga kastaa wuu ka duwan yahay kan kale iyadoo lagu saleynayo tirada codsiyada lagu daray qolka, tirada rakibaadda la oggol yahay, wareejinta, iwm. Hoos waxaa ku yaal liiska shatiyada ugu caansan ee Microsoft ay iibiso:
Xidhmada Alaabada Buuxa (FPP)
Barnaamijka Isticmaalka Guriga (HUP)
Soo saaraha Qalabka Asalka ah (OEM)
Kaadhka Furaha Alaabta (PKC)
Dhaqdhaqaaqa Goobta Iibka (POSA)
Soo dejinta Software Elektaroonigga ah (ESD)
Maaha Dib-u-iibsasho (NFR)
Dhammaan noocyada shatiga kor ku xusan, Xidhmada Buuxa (FPP), Barnaamijka Isticmaalka Guriga (HUP), Kaadhka Furaha Alaabta (PKC), Dhaqdhaqaaqa Iibka (POSA), iyo Soodejinta Software-ka Elektarooniga ah (ESD) waxay oggolaadaan in xafiiska loo wareejiyo kombuyuutar kale . Inta kale ee shatiyada, nasiib daro, lama wareejin karo.
Haddii aadan ka warqabin ama aadan si fudud u xasuusan nooca shatiga Xafiiska, raac habka hoose si aad u hesho.
1. Guji badhanka bilowga (ama riix Windows key + S), raadi Dalab amar oo guji Orod Maamule ahaan marka natiijadu soo noqoto. Haddii kale, ku qor cmd sanduuqa wada hadalka Run oo tabo ctrl + shift + gal.
Si kastaba ha ahaatee, koontaroolka koontada isticmaale ee soo booda ee codsanaya ogolaanshaha si loogu ogolaado Command Prompt inuu isbedel ku sameeyo nidaamkaaga ayaa soo muuqan doona. Guji Haa in loo ogolaado.
2. Si loo xaqiijiyo nooca shatiga Xafiiska, waxaan u baahan doonaa inaan u gudubno galka rakibaadda Xafiiska ee ku yaal isla markiiba.
Fiiro gaar ah: Guud ahaan, galka Microsoft Office waxa laga heli karaa gudaha folder Files ee C drive; Laakin haddii dariiqa caadada ah la dejiyay wakhtiga la rakibay, waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad ku dul wareegto Faylka Explorer oo aad hesho jidka saxda ah.
3. Marka aad hesho dariiqa rakibaadda saxda ah ee lagu xusay, ku qor cd + Jidka gal xafiiska Dakhliga amarka oo tabo geli.
4. Ugu dambeyntii, ku qor amarka hoose oo taabo geli si aad u ogaato nooca shatiga Xafiiska.
Dakhliga amarku wuxuu qaadan doonaa wakhti inuu soo celiyo natiijooyinka. Marka ay dhacdo, si taxadar leh u hubi Magaca Shatiga iyo Shatiga Sharaxaada. Haddii aad aragto ereyada Tafaariiqda ama FPP, waxaad u wareejin kartaa rakibaadda Xafiiskaaga PC kale.
Sidoo kale Akhri: Microsoft Word wuu joojiyay Shaqadii [XALIYEY]
Si looga hormaro qalooca, Microsoft waxay bilowday inay ogolaato dhammaan shatiyada Xafiiska 10 in lagu rakibo laba kombiyuutar oo kala duwan isku mar. Shatiyada qaarkood sida xidhmada Guriga iyo Ardayga ayaa xitaa la oggolaaday ilaa 3 rakibid oo isku xigta. Markaa haddii aad leedahay shatiga Xafiiska 2010, waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn inaad wareejiso laakiin taa beddelkeeda waxaad si toos ah ugu shuban kartaa kombuyuutar kale.
La mid maahan kiiska shatiyada Xafiiska 2013 in kastoo. Microsoft waxa ay dib u soo celisay rakibado badan oo waxa ay ogolaataa hal rakibo shati kasta, iyada oo aan loo eegin nooca xidhmada/shatiga.
Marka laga reebo rakibaadda isku xidhan, shatiyada Xafiisku waxa kale oo lagu gartaa wareejintooda. Si kastaba ha ahaatee, shatiga tafaariiqda oo kaliya ayaa la wareejin karaa. Ka eeg sawirka hoose macluumaadka ku saabsan tirada guud ee rakibaadda la oggol yahay iyo wareejinta nooc kasta oo shatiga.
Markaad ogaato nooca shatiga Xafiiska ee aad leedahay iyo haddii la wareejin karo iyo haddii kale, waa waqtigii la fulin lahaa habka wareejinta dhabta ah. Sidoo kale, xasuuso inaad haysato furaha badeecada oo anfacaya maadaama aad u baahan doonto si aad u caddayso sharcinimada shatigaaga oo aad dhaqaajiso Xafiiska.
Furaha badeecada waxaa laga heli karaa gudaha weelka warbaahinta rakibaadda iyo haddii shatiga la soo dejiyay/iibsanayay onlayn, furaha badeecada waxa uu ku yaalaa diiwaanka iibka/rasiidhka. Waxa kale oo jira tiro codsiyo ah oo dhinac saddexaad ah oo kaa caawin kara dib u soo celinta furaha alaabta ee rakibaaddaada hadda ee Xafiiska. KeyFinder iyo ProduKey – Soo kabsado furaha alaabta lumay (CD-Key) ee Windows/MS-Office waa laba ka mid ah software soo kabashada furaha alaabta ugu caansan.
Ugu dambeyntii, si loogu wareejiyo Microsoft Office 2010 iyo 2013 kumbuyuutar cusub:
1. Waxaan ku bilaabaynaa in aan Microsoft Office ka saarno kombayutarkaga hadda jira. Nooca Guddiga xakamaynta gudaha daaqadaha search bar oo guji fur marka ay soo noqoto raadinta.
2. In guddiga kantaroolka, fur Barnaamijyada & Tilmaamaha .
3. Ka hel Microsoft Office 2010 ama Microsoft Office 2013 liiska codsiyada la rakibay. Midig ku dhufo dusheeda oo dooro Ka saar
4. Hadda, u gudub kombiyuutarkaaga cusub (kaas oo aad rabto inaad ku wareejiso rakibaadda Microsoft Office) oo ka hubi nuqul kasta oo tijaabo ah oo bilaash ah oo ku yaal Xafiiska. Haddii aad hesho mid, uninstall iyada oo raacaysa nidaamka kor ku xusan.
5. Ku rakib Microsoft Office Kumbuyuutarka cusub adoo isticmaalaya CD-ga rakibaadda ama warbaahin kasta oo rakiban oo laga yaabo inaad haysato.
6. Marka la rakibo, fur codsi kasta oo ka socda qolka xafiiska oo guji Faylka dhanka kore ee bidixda. Dooro Xisaab laga bilaabo liiska soo socda ee fursadaha File.
7. Guji Dhaqdhaqaaqa Alaabta (Bdel Furaha Alaabta) oo geli furaha hawlgelinta alaabtaada.
Haddii habka kor ku xusani uu guuldareysto oo uu keeno qalad 'qalab badan', doorashadaada kaliya ayaa ah inaad la xiriirto shaqaalaha Taageerada Microsoft (Lambarada Taleefanka Xarunta Hawlgelinta) oo aad u sharaxdo xaaladda gacanta ku jirta.
Laga bilaabo Office 365 iyo 2016, Microsoft waxa ay shatiyada ku xidhaysay emailka isticmaalaha halkii ay ka ahaan lahayd qalabkooda. Tani waxay ka dhigtay habka wareejinta mid fudud marka la barbardhigo Xafiiska 2010 iyo 2013.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa dami shatiga oo ka saar xafiiska nidaamka hadda jira ka dibna ku rakib Xafiiska Kombiyuutarka cusub . Microsoft ayaa markaa si toos ah u hawlgelin doonta shatigaaga marka aad gasho akoonkaaga.
1. Kumbuyuutarka hadda ku shaqeeya Microsoft Office, fur browser-ka aad doorbidayso oo booqo boggan soo socda: https://stores.office.com/myaccount/
2. Geli aqoonsigaaga gelitaanka (cinwaanka boostada ama lambarka taleefanka iyo furaha) iyo Soo gal akoonkaaga Microsoft.
3. Marka la soo galo, u beddel MyAccount mareegaha.
4. Bogga MyAccount waxa uu hayaa liiska dhammaan Alaabta Microsoft. Guji midabka oranji-cas Ku rakib badhanka hoostiisa qaybta Ku rakib.
5. Ugu dambeyntii, hoosta ku rakib macluumaadka (ama la rakibay), dhagsii Dami rakibida .
Soo-gud-up ku weydiinaya inaad xaqiijiso tallaabadaada Deactivate Office ayaa soo bixi doona, si fudud guji Dami mar kale si loo xaqiijiyo. Habka deminta waxay qaadan doontaa wakhti in la dhammaystiro.
6. Adigoo isticmaalaya tillaabooyinka lagu sharraxay qaabkii hore, fur daaqadda Barnaamijka iyo Features-ka iyo ka saar Microsoft Office kombuyutarkaaga hore .
7. Hadda, kombuyuutarka cusub, raac tillaabooyinka 1 ilaa 3 oo naftaada ku deji bogga MyAccount ee akoonkaaga Microsoft.
8. Guji kan Ku rakib badhanka hoosta qaybta macluumaadka ku rakib si aad u soo dejiso faylka rakibaadda Xafiiska.
9. Sug browser-kaagu inuu soo dejiyo faylka setup.exe, marka la dhammeeyo, laba jeer dhagsii faylka oo raac tilmaamaha shaashadda si aad u soo dejiso. ku rakib Microsoft Office kumbuyuutarkaaga cusub .
10. Dhammaadka habka rakibidda, waxaa lagu weydiin doonaa inaad gasho Xafiiskaaga Microsoft. Geli aqoonsigaaga gelitaanka oo guji Soo gal .
Xafiisku wuxuu soo dejin doonaa faylal dheeraad ah oo gadaal ka jira wuxuuna si toos ah u shaqayn doonaa dhawr ilbiriqsi gudahood.
Sidoo kale Akhri: 3 Siyaabaha Looga Saaro Calaamada Baaragaraafka (¶) ee Word
Waxaan rajeyneynaa inaad ku guuleysatay inaad Microsoft Office u wareejiso kumbuyuutarkaaga cusub. In kasta oo, haddii aad wali la kulanto wax arrimo ah raacaya habka kor ku xusan, nala xidh annaga ama kooxda taageerada Microsoft (Taageerada Microsoft) si aad u hesho xoogaa caawimo ah habka wareejinta.